अन्याैलताका बीच खुल्न थाले पाल्पाका विद्यालय! - Sero Fero News
अन्याैलताका बीच खुल्न थाले पाल्पाका विद्यालय!
सेराेफेराेन्यूज प्रकाशित मिती - ९ मङ्सिर २०७७, मङ्गलवार
शैक्षिक सत्र अन्याैलताका बीच पाल्पाका सरकारी तथा संस्थागत विद्यालय खुल्न थालेका छन् । विद्यालयमा विद्यार्थीहरूकाे भाैतिक प्रत्यक्ष उपस्थितिमै पठनपाठन सुरू गरिएका छन् । विद्यालय धमाधम खुल्न थालेपछि अभिभावकहरू विद्यार्थी विद्यालयमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने अन्याैलमा परेका छन् ।
‘शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन औपचारिक रुपमै विद्यालयमा पठनपाठन सुरु गरेका छाैं’, वगनाशकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बस्यालले भने, ‘गाउँमा संक्रमितहरू धेरै छैनन्, कोरोना त्रासमा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु हुँदैन।’ सामाजिक दूरी कायम गरेर पठनपाठन सुरु गरिएको उनले बताए। ‘सार्वजनिक यातायात तथा बजार निर्वाध रुपमा खुलेपछि विद्यालय बन्द गर्नुको कुनै अर्थ छैन,’ निस्दी गाउँपालिकाका एक शिक्षकले भने, ‘विद्यालयमा मात्र कोरोना आउने होइन।’
तानसेन नगरपालिकाले विद्यालयसँग कुन किसिमबाट विद्यालय खाेल्न सकिन्छ भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकहरूसँग छलफल गरेर लिखित रूपमै निर्णय गरि पठाउन अनुराेध गरेकाे तानसेन नगरपालिका शिक्षा शाखाले गरेकाे छ । तानसेन बारूदखानका अभिभावक उमानाथ न्याैपानेले एक वर्ष छाेरालाइ नपढाउँदैमा उसकाे भविष्य बिग्रन्छ भन्नेमा आफू विश्वस्त नभएकाेले विद्यालय खुले पनि पठाउन नसक्ने बताए । तानसेन उच्च जाेखिममा रहेकाे छ, जुनसुकै समय सङक्रमित हुन सकिन्छ, धेरै कुराहरू ध्यान दिनु छ न्याैपानेले भने ।
शैक्षिक सत्र २०७७ चैत वा असारसम्म भन्ने अन्याैलता कायमै छ । आंशिक पाठ्यक्रम पुरा गर्ने हाे वा पुरै पाठ्यवस्तु ? विद्यार्थी पुरै समय विद्यालयमा उपस्थित हाेलान्? सबै विद्यार्थी विद्यालयमा सुरक्षित महशुस गर्न सक्लान्? पठनपाठन गराउने शिक्षकशिक्षिका सुरक्षित महशुस गर्लान्? यस्तै समयमा शिक्षकहरू विद्यार्थीलाइ कुन मानसिकताले सिकाइ रहेका हाेलान्? बालबालिका विद्यालय गएपछि समुहमा बस्ने, विद्यार्थी र शिक्षक तथा विद्यार्थी–विद्यार्थीबीचको भाैतिक दूरी कायम राख्ने लगायतका विषय स्वास्थ्यका हिसाबले गम्भीर छन् ? यस्ता अनेकाैं प्रश्नहरू अहिले उब्जिन थालेका छन् ।
विषम स्थितिमा पनि विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार वञ्चित हुन हुँदैन भन्ने मान्यता एकातर्फ छ । सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने र विद्यालयमा बालबालिकालाई परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने गरि निर्देशन र निर्देशिका समयसमयमा जारी हुँदै आएका छन् । निर्देशनका लागि निर्देशिका जारी गर्दैमा सिकाइले निरन्तरता भने पक्कै पाउँदैन । तर अहिले केही काेराेना सङक्रमणकाे नजिक नपरेका र असामान्य अवस्थाकाे आँकलन समेत गर्न नसक्ने व्यक्तिले बसमा यात्रा गर्दा र बाटाेमा हिँड्दा काेराेना नसर्ने र विद्यालयमा जाँदा काेराेना सर्छ र? भन्ने बेतुक तर्क गर्दै छन् । जसले काेराेनालाइ नजिकबाट नियाल्दै छन् उनीहरू काेराेनालाइ सामान्यीकरण गर्न नहुने भन्दै बालबालिकाहरूसँग भाैतिक दूरी कायम गर्नु नितान्त आवश्यक रहेकाे बताउँदैछन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका एक जनप्रतिनिधिले जुनसुकै समयमा पनि जस्ताेसुकै पनि परिस्थिती उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै आफूलाइ तयारी गरि मुटुमाथी ढुङगा राखि पढाइलाइ निरन्तरता दिन लगाउन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएकाे नाम नबताउने शर्तमा उनले भने ।
सरकारले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिकसत्रमा गणना गराउने गरी नयाँ ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी गरेको छ । कोरोना महामारीको जोखिम बढिरहेकाले विद्यालय खुल्न नसकेको स्थिति र अन्य प्राकृति विपत्तिमा पनि यस प्रकारको वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने गरी निर्देशिका जारी भयाे । सरकारले कोरोना संक्रमणदर घट्दै गएको भन्दै विद्यालयमा पठन-पाठन खोल्ने तयारी गर्याे। विद्यार्थीहरूको पढाई अस्तव्यस्त भएपछि सरकार विद्यालय खोल्ने तयारीमा जुटेको हो।
सरकारले ‘विद्यालय पुनः संचालन सम्बन्धी मापदण्ड’ जारी गरेपछि देशैभर सोही मापदण्ड टेकेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र अभिभावकसँगको समन्वयमा स्थानीय सरकारले निर्णय गर्छ ।
आफ्नो समुदाय भित्रको अवस्थाको आँकलन गरी विद्यालय खोल्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनेको कोभिडसंगको लडाइमा सबै संगै हुनु पनि हो । दोस्रो, विद्यालय खोल्नुभन्दा सञ्चालन भएपछि अपनाउनु पर्ने सतर्कता अझ महत्वपुर्ण हुन्छ किनभने विद्यालयहरु नै कोभिड संक्रमण बिस्तार गर्ने केन्द्र बन्न सक्छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो परिवेश र उपलब्ध सञ्चार पहुँचका आधारमा दूर तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट प्रभावकारी र व्यवस्थितरूपमा सिकाइमा निरन्तरता दिन यसअघि पनि आग्रह गरेको थियो तर सरोकारवालाहरू भने अन्तिम समयमा स्थानीय तहकाे निर्देशन पर्खेर बसेकाे देखिएकाे छ ।